Tutankhamun dia mahafinaritra lahatsary slot lalao izay manana 5 reels ary 20 paylines. Efa nitsidika indray ilay Egyptiana slots ara-lohahevitra, ary mampiasa ny fahiny mba haka anao tandindona lehibe kokoa Fandresena.
Nisy Ejipsianina Farao, izay nalevina velona sy saro-pantarina izany fahafatesana no hita tamin'ny taona 1922 amin'ny Howard Carter.
Azonao atao ny misoratra anarana maimaim-poana ao amin'ny Coinfalls Casino sy milalao ity lalao ity, ary manana fonosana tonga soa lehibe ny 200% amin'ny petra-bola voalohany ny £ 50.00. Ankoatra, isika ihany koa dia manana isan-kerinandro sy isam-bolana toy ny fisondrotana Game ny andro, Cashback andro, ary ny petra-bola Tsy misy tombony ho anao be atao foana.
Azo Games no rindrambaiko mpamatsy for Tutankhamun slot lalao. Ny sary sy ny gameplay tanana any an-tanana. Izany endrika efa nanaovany lalao amin'ny toetra lehibe, ary nisy valin-be avy any amin'ny mpilalao.
Tutankhamun Video slot azo nilalao tao amin'ny lalao ho an'ny voly amin'ny Coinfalls Casino. Rehetra tsy maintsy atao dia ny mametraka ny vola hilokana avy 0.01p ho £ 100.00. Rehefa ianao no nametraka ny hilokana namely ny kofehy ireny bokotra sy handray valisoa ambony.
Ny lalao dia ahitana ny marika ambany sarobidy toy ny 10, 9, J, Q, A, ary K izay handoa anareo multiplier valisoa ny ho amin'ny x80. Izany ihany koa ny mampiasa ny fanehoana an'ohatra ambony sarobidy toy ny voninkazo, vazy, Mason'ny Horus, ary Gold famantarana.
Ireo marika mila hiseho eo tsikombakomba telo na mihoatra dia afaka manantena ny handresy ny ho x1, 000 multipliers. Ny Farao saron-tava dia aseho ho toy ny bibidia marika manampy anao hahazo ny tena ratsy jackpot habetsaky ny x40, 000.
Ny bibidia marika ihany koa ny sary rehetra soloina eo amin'ny reels afa-tsy ny aelezo Logo. Azonao atao ihany koa ny handresy multipliers hafa toy ny x10, 000, x500, x100, ary x40.
Ny maimaim-poana mampiseho spins ho mampandeha raha vao misy aelezo sary na aiza na aiza niantsona teo amin'ny efijery izay mahazo anao 15 maimaim-poana spins niaraka tamin'ny multiplier ny x3. Izany fahiny miraingiraingy azon'ny mitady lalao misarika ny whopping RTP ny 95.39% ary misy ihany koa ny fomba Autoplay misy amin'ny lalao ity.
Tutankhamun slot dia amim-pifaliana no lalao izay mety hanampy ny fototra jackpot vola. Ny sary sy ny mombamomba ny mozika dia ny tampony notch kalitaon'ny. Register izao any am-Casino hilalao mampientam-po io slot lalao ary mankafy ny tambin tonga soa ny 200% amin'ny petra-bola voalohany.